10 ဥရောပမှာမိသားစုအားလပ်ရက်အတွက်အချက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပမှာမိသားစုအားလပ်ရက်အတွက်အချက်များ
အကယ်၍ သင်ကောင်းစွာအစီအစဉ်ဆွဲလျှင်ဥရောပရှိမိသားစုအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်များသည်မိဘများနှင့်အသက်အရွယ်မရွေးကလေးများအတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်. ဥရောပသည်ရဲတိုက်နှင့်တံတားများ၏မြေဖြစ်သည်, အစိမ်းရောင်ခမ်းနားထည်ဝါစွာပန်းခြံများ, မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများသည်တစ်နေ့တာအတွက်မင်းသမီးနှင့်မင်းသားများအဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်သည့်နေရာများရှိသည်. ရှိပါတယ် ကြီးစွာသောတောင်တက်လမ်းကြောင်း ကြီးစွာသောပြင်ပမှာစွန့်စားမှုအဘို့အစက်အပြောက်အများကြီး, ဒါပေမယ့်ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားလာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်.
စီစဉ်ခြင်းမှထုပ်ပိုးခြင်းအထိ, ကျနော်တို့ကအိပ်မက်မက်တဲ့မိသားစုခရီးစဉ်များအတွက်အန္တိမလမ်းညွှန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်. ငါတို့လိုက်နာပါ 10 မော်ကွန်းမိသားစုခရီးစဉ်သေချာစေရန်ဥရောပရှိမိသားစုအားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များ.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမှအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သဖြင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် တစ်ဦးကရထား Save, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်များ.
1. ဥရောပ၌မိသားစုအားလပ်ရက်များအတွက်သိကောင်းစရာများ: သင့်ကလေးများပါ ၀ င်ပါ
လျှို့ဝှက်ချက် မိသားစုအားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်မိသားစုတစ်ခုလုံးသည်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ရှိပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည့်အခါဖြစ်သည်. ဥရောပဟာအံ့ land စရာကောင်းတဲ့အထင်ကရနေရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, ဆွဲဆောင်မှု, အပန်းဖြေပန်းခြံများ, နှင့်လည်ပတ်ရန်နေရာများ, နှင့်သင်၏ကလေးများကိုဥရောပသို့သွားရန်စီစဉ်ခြင်းတွင်အိပ်မက်အားလပ်ရက်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်. သင်၏သုတေသနကိုကြိုတင်ပြုလုပ်ပါ, သင်လည်ပတ်လိုသည့်ဆွဲဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်ပါ, နှင့်သင်၏ကလေးတွေကိုချစ်မယ်လို့အစက်အပြောက်, ပြီးတော့ကလေးတွေရွေးပါ 3-4 စာရင်းအပေါ်ဆွဲဆောင်မှု. ဤနည်းအားဖြင့်လူတိုင်းပျော်ရွှင်။ နေ့စဉ်မျှော်လင့်ရန်တစ်ခုခုရှိသည်.
2. AirBnB တွင်နေပါ
Airbnb စျေးနှုန်းချိုသာသည်, ပိုပြီးပုဂ္ဂလိက, နှင့်နေအိမ်ခံစားရှိပါတယ်, အရာအိမ်မှာဝေးအခါကလေးတွေအဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်. Airbnb ဥရောပရှိမိသားစုများအားလပ်ရက်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာသည်ဥရောပရှိဟိုတယ်များသည်စျေးကြီးလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်, တောင်မနက်စာသဘောတူညီချက်နှင့်အတူ. Airbnb တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်သင်၏အစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ရန်အတွက်မီးဖိုချောင်တစ်ခုပေးသည်, နေ့လယ်စာစားရန်, နေ့ကိုဆွေးနွေးနိုင်သည့်နံနက်စာစားချိန်.
လည်း, ကလေးများနှင့်မိဘများအတွက်နေရာနှင့်သီးသန့်နေရာများစွာရှိသည်, ရှည်လျားသောရှာဖွေစူးစမ်းပြီးနောက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်.
Florence သို့ Pisa ရထားစျေးနှုန်းများ
3. ဥရောပ၌မိသားစုအားလပ်ရက်များအတွက်သိကောင်းစရာများ: အလုပ်များသော City Centre မှထွက်ပါ
ဥရောပသည်သာယာလှပသည့်သဘာဝသိုက်များနှင့်အမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, ကြီးစွာသောတောင်တက်လမ်းကြောင်းနှင့်ပျော်ပွဲစားအစက်အပြောက်နှင့်အတူ. ဥရောပရှိသဘာဝသည်အလွန်စွယ်စုံဖြင့်သင်ကလေးငယ်များနှင့်အတူခရီးထွက်လျှင်ပင်, သင်ဆဲစူးစမ်းလေ့လာနိုင်တယ် ရေတံခွန်များနှင့်ရှုထောင့်များ.
ပန်းခြံအများစုကိုအသုံးပြုနိုင်သည် မီးရထားကနေတဆင့် မှ ကြီးမားတဲ့မြို့စင်တာများ. သငျသညျကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်လာလျှင်, သငျသညျအကြီးအအပြင်မှာပျော်စရာရှိသည်နှင့်လတ်ဆတ်သောလေထုပျော်မွေ့သင့်တယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်မရှိ, သစ်တောများ, နှင့် themed ပန်းခြံများ.
ကလေးများနှင့်အတူခရီးသွားစဉ်တိုင်းတစ်ပါးသို့သွားရန်သင်၏လမ်းကိုသိခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်. သငျသညျရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်မြို့ပတ်ပတ်လည်ခြေလျင်သို့မဟုတ်လေဆိပ်ကနေခရီးသွားလာရချင်ကြဘူး, မသက်ဆိုင်သည့်ရာသီဥတု. ထိုကွောငျ့, သင်၏ဥရောပသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စီစဉ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်မှာယူခြင်းတို့သည်မိသားစုအားလပ်ရက်များစွာကိုပေးလိမ့်မည်.
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အလွန်အမင်းစိတ်ချရသောဖြစ်သည် နှင့်ဥရောပ၌အဆင်ပြေ. မြို့လယ်ခေါင်အတွင်းနှင့်အပြင်တွင်ခရီးသွားလာခွင့်များစွာရှိသည်. သင်ကနေရာတိုင်းကိုရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ရထားနဲ့လမ်းရထားနဲ့သွားလာရတာကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အပေါ်အသွားအလာကိုရှောင်ကြဉ်ပါ.
နှိုင်းယှဉ်မှုအရ ကားငှားရမ်းခြင်း နှင့်ကားရပ်နားရန်ရှာဖွေနေသို့မဟုတ်ပဲလမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အချိန်အများကြီးဖြုန်းနေကြတယ်, သငျသညျစီးနှင့်မုန်ပျော်မွေ့နိုင်ဘူး, ဘယ်တော့လဲ ဥရောပကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားလာရထား. ကြီးမားတဲ့ ဥရောပမှာခရီးသွားခြင်း၏အားသာချက် ကလေးတွေနဲ့ရထားနဲ့သွားရင်ကလေးတွေဟာယူရိုရထားလမ်းကြောင်းနဲ့အခမဲ့သွားကြတာပေါ့.
5. ဥရောပ၌မိသားစုအားလပ်ရက်များအတွက်သိကောင်းစရာများ: Pack ကိုအလင်း
အတွက်ခရီးသွားလာ ဥရောပရထားဘူတာ တွန်းလှည်းနှင့်ကြီးမားသောခရီးဆောင်သေတ္တာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်သည်. အချို့သောဘူတာများတွင်ဓာတ်လှေကားများသို့မဟုတ်စက်လှေကားများမရှိကြပါ, ဒါကြောင့်အလင်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ခရီးသွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ခေါက်။ ရသောကုလားကာနှင့်သယ်ဆောင်ရန်သေချာပါစေ, ကလေးတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိပါကဤနည်း, သူတို့အိတ်တွေသယ်နိုင်.
အပြင်, ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုသည်မှာမိသားစုခရီးသွားခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, ကလေးများအားရထားများပေါ်တွင်အရောင်တင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစီးနင်းလိုက်ပါ, အော်ဒီယိုစာအုပ်များ, ကာတွန်းကို iPad ပေါ်မှာကြည့်ခြင်း, ကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်လိမ့်မည်.
မြူးနစ်မှ Passau ရထားစျေးနှုန်း
Nuremberg မှ Passau ရထားစျေးနှုန်းများ
Salzburg မှ Passau ရထားစျေးနှုန်းများ
ဥရောပရှိစားသောက်ဆိုင်များသည်ကလေးများအတွက်အစားအစာများကိုမပေးကြောင်းသိသင့်သည်, ဒါကြောင့်လူကြီးများပါပဲ’ လူတိုင်းအတွက်ဝေမျှ. အထူးသဖြင့်သင်သည်အီတလီသို့ခရီးသွားနေလျှင်ဥပမာကိုမှတ်သားရန်အထူးအရေးကြီးသည်, သငျသညျကလေးတွေ '' အရွယ်အစားပီဇာသို့မဟုတ်ခေါက်ဆွဲဝေမျှရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ထိုကြောင့်ပြင်ဆင်လော့.
ဒါပေမဲ့, သင်ထွက်စားသောက်ရန်မလိုပါ. ဥရောပရှိကလေးများနှင့်အတူသွားလာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်တစ်ခုမှာရှိခြင်း မိသားစုပျော်ပွဲစား. အစိမ်းရောင်ခမ်းနားထည်ဝါသောမြေများရိုးရှင်းစွာသင့်မိသားစုပျော်ပွဲစားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောကြောင့်တစ် ဦး ကအများကြီးဥရောပရဲ့ပန်းခြံများနှင့်သဘာဝအကြောင်းကိုပြောဆိုထားပြီးဖြစ်သည်. pastries ဖမ်းပြီး, လတ်ဆတ်တဲ့အသီး, ဒေသခံစျေးကွက်တွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သင်နေ့လည်စာစားပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်. တောင်သူစျေးကွက်ရှိစျေးသည်များသည်စူပါမားကက်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များထက်သိသိသာသာစျေးသက်သက်သာသာသာဖြစ်သည်. အားလုံးဖွင့်ရန်, သငျသညျတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုက်နှင့်လုံးဝနှင့်အတူပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်အမြင်များကိုစဉ်းစားပါ.
7. ဥရောပ၌မိသားစုအားလပ်ရက်များအတွက်သိကောင်းစရာများ: ဥရောပ၌လှေနှင့်အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်
စာအုပ်များနှင့်အက်ပ်များဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လှေထဲဝင်တာ၊ လမ်းလျှောက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်. ဥရောပမြို့ကြီးအများစုမှာအဲဒီလိုရှိတယ် အခမဲ့မြို့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ် ဒေသခံလမ်းညွှန်နှင့်အတူ. ဤရွှင်လန်းသောလမ်းညွှန်သည်မြို့၏အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြသလိမ့်မည်, သငျသညျမရှိဘဲလမ်းများ '' ဝင်္များတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရတဲ့. နေ့လည်စာစားပွဲများနှင့်အတူဒေသခံစားသောက်ဆိုင်များကိုညွှန်ပြပြီးမြို့တော်၌ဘာလုပ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များကိုလမ်းညွှန်လိမ့်မည်.
ဥရောပသည်တူးမြောင်းများနှင့်မြစ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦး လှေခရီးစဉ်သည်အခြားပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် ခရီးသွားနှင့်စူးစမ်းဖို့ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်း. ၎င်းသည်ကလေးများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးသင့်အတွက်အနားယူပါလိမ့်မည်.
Zurich ရထားစျေးနှုန်းများမှ Interlaken
Lucerne မှ Zurich ရထားစျေးနှုန်းများ
Zurich ရထားစျေးနှုန်းမှ Bern
ဂျီနီဗာမှ Zurich ရထားစျေးနှုန်း
8. Carousel စီးနင်းများအတွက်အချိန်လုပ်ပါ
ဥရောပမြို့အများစု၌တောက်ပပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအဝိုင်းလေးရှိလိမ့်မည် အဓိကမြို့တော်ရင်ပြင်. လာမယ့် site ကိုမှပြေး၏, ရပ်, နှင့် kiddos သူတို့လိုချင်သလောက်စီးနင်းအပေါ်ဆက်လက်ခွင့်ပြုပါ. Eiffel Tower သည်သင့်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည့်အခါ carousel စီးနင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်, ကလေးငယ်များနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အမှတ်ရစရာအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်သည်.
9. ဥရောပ၌မိသားစုအားလပ်ရက်များအတွက်သိကောင်းစရာများ: Oops အတွက်အချိန်ယူပါ
သင်ဆွစ်ဇာလန်၌ရှိသောကြောင့်, အရာအားလုံးသင့်မိသားစုခရီးစဉ်အပေါ်ချောချောမွေ့မွေ့သွားလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မပေးပါဘူး. ကလေးတွေနဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါ, ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်, ပင်ဥရောပ၌တည်၏, ဒါကြောင့်ခရီးစဉ်အပေါ် oops များအတွက်အချိန်စွန့်ခွာရန်သေချာစေပါ. ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောအံ့သြဖွယ်ရာများအတွက်အချိန်ယူပါ, နှောင့်နှေး, grumpy kiddos မှကျေးဇူးတင်စကားအစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲမှုများကို, နှင့်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ညှိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်.
10. The Beaten Path မှ The Kids Europe ကိုပြပါ
ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားလာဘို့ငါတို့ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များတစ်ခုမှာသူတို့ကိုမည်သို့ပြသနေသည် ဥရောပ၌ရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်း. အဓိကရင်ပြင်ရှိထုများကိုရှောင်ပါ, gelato များအတွက်လိုင်းများ, နှင့်မိသားစုပုံ, သူတို့အားဝှက်ထားသောအစက်အပြောက်သူတို့ကိုယူပြီးအားဖြင့်, သာယာလှပကျေးရွာများ, နှင့်ထူးခြားသောသဘောသဘာဝ.
ကလေးတွေကနတ်သမီးပုံပြင်တွေကိုနှစ်သက်ကြတယ်, ဒါကြောင့်ဒဏ္legာရီ၏လုပ်နေကြသည်သောအစက်အပြောက်သူတို့ကိုယူပါ. ဒါဟာအတူတူအရည်အသွေးပြည့်အချိန်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ, ဥရောပရှိမိသားစုအားလပ်ရက်များကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပါ, သူတို့ကိုဥရောပရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသင်ပေးပါ.
ဥရောပသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမိသားစုအတွက်အားလပ်ရက်ခရီးဖြစ်သည်. သင်သည်စွန့်စားမှုရှာဖွေသည့်မိသားစုဖြစ်စေ၊, ဥရောပကအားလုံးကိုရပြီ. ဖြည့်စွက်ကာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အထူးမြို့ဖြတ်သန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဥရောပသည်မိသားစုနှင့်ရင်းနှီးသည်. ငါတို့ 10 သင်သည်ရဲတိုက်များနှင့်ဒဏ္endsာရီများပြည်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်သို့မဟုတ်ပထမ ဦး ဆုံးခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်သောအခါဥရောပရှိမိသားစုအားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များသည်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးမိသားစုအားလပ်ရက်များကိုရထားဖြင့်စီစဉ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပတွင်မိသားစုအားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များ (၁၀) ချက်” ကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းလိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/?lang=my ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, နှင့် / ja သို့ / es သို့ / de နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုလဲပြောင်းနိုင်သည်.
Europewithkids familyholiday familytrip မိသားစု မိသားစု ချစ်တယ်
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ဥရောပခရီးသွား